Iiplippies: Ukuvela kweTekhnoloji yeXesha eliDala Martech Zone
Iiplippies: Ukuvela kweTekhnoloji ye-Century-Old
Iincwadi zeflip zezinye zeendlela zokuqala zoko kubhekiswa kuko namhlanje ukusebenzisana nemultimedia kwaye banelungelo elilodwa lomenzi eUnited States ngo-1882! Thumela Iziqhwithi ividiyo kunye nelogo, kwaye baya kunceda ukwenza ubugcisa obunxibelelanayo abababizayo Ukuthengisa okuxhotyiswe ngobhontsi. Ubuncinci beodolo ziincwadi ezingama-2,500 XNUMX - kodwa yeyiphi indlela ebhetele yokubonisa imveliso, inkonzo okanye uphawu. Iincwadi zeFlip zenza incwadana emnandi yokunxibelelana ngomnyhadala okanye umboniso wezorhwebo.
Nokuba ziipistachios, iiJeeps, iiKhamera okanye iiMbiza zeti ... kukho into epholileyo nengafaniyo neteknoloji yeflipbook ukufumana ingcaciso ebonakalayo kwincwadana yemithombo yeendaba enokuthi umntu ahambe nayo. Akukho sidingo sokufaka iplagi, ukukhuphela, okanye ukufaka… vele ulungiselele ubhontsi wakho uhambe!
tags: flip incwadiIincwadi zeflipiiplippieimbaliukusebenzisana nemultimedia
Nokwandisa ukuBonakala kweVenkile yakho yoSetyenziso ngeSelfowni
Iindlela eziqinisekisiweyo IziBonelelo zoShishino oluNcinci kwiNtengiso yezeNtlalontle